के सभापतिले नौका पार लगाउनुहोला? – Complete Nepali News Portal
के सभापतिले नौका पार लगाउनुहोला?
March 30, 2017	1,190 Views
यदि भाग्यशाली हुनु नै जीवनको सफलता हो भने समकालीन नेपाली राजनीतिमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा जति सफल नेता सायदै कोही होलान्। वहाँले तीन पटक सम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य मात्र पाउनुभएन आफैले पार्टी चोइटाएर पछि सिंगो पार्टीको सभापति बन्ने अवसर पनि पाउनुभयो। विश्व इतिहासमा यस्तो घटना बिरलै देख्न सुन्न पाइन्छ। यदि नेताको नेतृत्वको सफलताको कसी उसको भाग्य मात्र नभएर उसको आदर्श, विचार, योजना र आफ्ना योजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमता पनि हो भने वहाँलाई सय पूर्णांकमा कति नंबर दिन सकिएला?
आफू निर्वाचित भएको एक वर्षपछि नै भएपनि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बनाउन सफल भएको श्रेय वहाँलाई दिनैपर्छ। त्यस बाहेक चारैतिर अस्तव्यस्तता मात्र छ। निर्वाचित भएको दुई महिना भित्र नियुक्त गरिसक्नु पर्ने पदाधिकारीको नियुक्ति वहाँले गर्न सक्नुभएको छैन, न त विभागहरू नै गठन गर्न सक्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ गर्नैपर्ने कुरा पनि कुनै महत्वपूर्ण कारणले थाती राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिने कुरा हो। तर तीन पटक प्राप्त भइसकेको पद पुन: हाँसिल गर्न वहाँले संगठनलाई नै बन्धक बनाउनुभएको छ भन्ने जगजाहेर भएपछि नेपाली काँग्रेसका आम कार्यकर्तामा लज्जाबोध हुनु स्वाभाविक नै हो। विधि, विधान कार्यान्वयनलाई मूल नारा बनाएर महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको सभापतिलाई के यो सुहाउला?
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा वहाँको अभीष्ट सार्वजनिक भएपछि वहाँलाई सुदूर पश्चिमको मात्र नभएर सिंगो नेपालको नेता देख्न चाहनेहरूको भावनामा ठेस पुगेको छ। त्यस्तै राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा प्रकट भएको वहाँको आत्मकेन्द्रित गैर राजनैतिक सोच र लालचले पार्टीको छवि नै धूमिल भएको छ।
स्थानीय निर्वाचनको मुखमा नेपाली काँग्रेस जस्तो सबैभन्दा ठूलो पार्टी आज संपूर्ण जिल्लामा दर्ता समेत हुन सकेन। यसको ज़िम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्दैन?
पार्टीको तर्फबाट चार दिनको अन्तरमा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको आगामी साधारण सभा स्थगन गर्ने र यथावत सम्पन्न गर्ने दुई विरोधाभासपूर्ण निर्देशन आउनुबाट पनि पार्टी कसरी संचालन भइरहेको छ बुझ्न सकिन्छ।
सत्ताको लागि जे पनि गर्ने संस्कृतिलाई मलजल गरेर नेपाली काँग्रेसको बलिदानीपूर्ण, रक्तरंजित इतिहासमा लगाइएको दागको जिम्मेवारी पनि वहाँले लिनुपर्छ कि पर्दैन?
आफ्नो कार्यशैलीमा पूरा सुधार नल्याई के सभापतिले आगामी निर्वाचनहरूमा नेपाली काँग्रेसको नौका पार लगाउन सक्नुहोला?